Amerika Avaratra Belize
Firenena Belize iray tato anatin'ny taona vitsy dia nahazo nalaza ary nahasarika mpizaha tany maro avy amin'ny firenena samihafa. Ny endri-pandehany dia ahitana karazana tsara tarehy, izay natsangana noho ny natiora tsy voaaro, ary ny fanatanjahan-tena be dia be, izay voaro tamin'ny fahiny. Izany dia manakaiky ny faritra rehetra any Belize, anisan'izany ny tanànan'i Benque Viejo del Carmen.
Benque Viejo del Carmen dia eo amin'ny toerana misy ny tanàna andrefana any Belize, 130 km miala ny renivohitry ny firenena, eo akaikin'ny sisintany amin'i Guatemala. 13 km avy eo dia misy tanàna hafa - tanànan'i San Ignacio . Eo amin'ny sisin'ny tanàna koa ny reniranon'i Mopan . Tahaka an'i Belize, teo amin'ny toerana nisy an'i Benque Viejo del Carmen dia nisy tanàna kely tany Maya.
Hatramin'ny fotoana nahazoan'i Belize fahaleovan-tena, dia nisy fivoarana haingana tany Benque Viejo del Carmen. Eto dia misy tambajotra lehibe, ny Fiesta isan-taona dia ny fivoaran'ny fizahan-tany sy ny fotodrafitrasa. Ny mpizaha tany amin'ny zoron-dalana rehetra dia manolotra fahatsiarovana, izay azo vidiana amin'ny fahatsiarovana ny dia.
Benque Viejo del Carmen - mpitsidika
Eo amin'ny manodidina ny tanàna dia sary famantarana fahiny momba ny sivilizasiona toy ny Shunantunich , izay ahitana sora- miafin'ny sivilizasiona Maya fahiny. Mipoitra eo amin'ny havoana iray izay mifanakaiky amin'ny reniranon'i Mopan. Ny fombafomba dia natao tao amin'ny faritry ny Maya fahiny.
Misy ny angano maromaro mifandray amin'ilay toerana, izay manazava ny anarana hoe "Shunantunich". Amin'ny dikanteny dia midika hoe "vehivavy vato" izany. Araka ny tantaran'ireo tranainy taloha dia toy ny fasika amin'ny endriky ny vehivavy manana maso mena izay niseho teo amin'ny lavaka vato tao El Castillo , ary avy eo dia nanjavona tao amin'ny rindrina.
Ny manodidina an'i Shunantunich dia eo amin'ny 6 metatra toradroa. km, ny velaran-tany dia misy kianja 6, manodidina ny sasin-tanan'ny lapa fahiny, tendrombohitra maro. Ny tranobe malaza indrindra dia ny piramida El Castillo, izay 40 metatra ny haavony. Trano mitson-droa voaravaka legioma marevaka. Amin'ny alàlan'ny El Castillo, misy andalana roa afovoan'ny tanàna. Tao amin'ny faritaniny dia nisy fombafomba natao, natao ho an'ny sehatra elitan'ny fiarahamonina.
Ny tanànan'i Benque Viejo del Carmen dia vonona hanolotra trano fandraisam-bahiny mpizaha-tany, izay mipetraka matetika ao amin'ny faritra maitso eny amin'ny toerana voajanahary malaza. Anisan'ny malaza indrindra amin'izy ireo ianao ka mahafantatra ireto manaraka ireto:
Hotel TreeTops - dia voahodidin'ny faritany maitso tsara tarehy. Ny vahiny dia afaka miala sasatra eny an-kalamanjana eny an-kalamanjana na mandehandeha any amin'ny zaridaina. Ao amin'ny faritra manodidina dia fialamboly toy ny fanjonoana, lakana, soavaly mandeha, mandeha. Ny hotely dia afaka manofa fiara, ary ireo mpankafy ara-panatanjahan-tena dia afaka manararaotra ny fitaovana ilaina.
Hotel CasaSantaMaria - manolotra safidy malalaka efitra. Afaka mandeha eny amin'ny faritra maitso maitso ianao na raha te-haka baraka. Afaka mihinana ao amin'ny trano fisakafoanana ianao, izay azonao atao amin'ny sakafo avy any an-toerana na iraisam-pirenena. Afaka misakafo al fresco ao amin'ny faritra voatokana manokana koa ianao. Ny hotely dia eo amoron'ny renirano, noho izany dia afaka mandeha manjono na rano fanatanjahan-tena ianao.
Restôranta Benque Viejo del Carmen
Ireo mpitsidika izay miala sasatra ao Benque Viejo del Carmen dia hisotro amin'ny iray amin'ireo trano fisakafoanana na kafe. Manompo any an-toerana, Amerika atsimo, Karaiba, Amerika afovoany izy ireo. Anisan'ireo trano fisakafoanana be mpitsidika indrindra ireto manaraka ireto: ElSenorCamaron, J's & H Diner .
Ahoana ny hahatongavana any amin'i Benque Viejo del Carmen?
Benque Viejo del Carmen dia 13 km miala ny tanànan'i San Ignacio ary maherin'ny 120 km miala amin'ny seranam-piaramanidina iraisam- pirenen'i Belize . Ho tonga any amin'io tanàna io ianao dia afaka mandresy ny lavitra amin'ny bus na fiara.
Belmopan - mpizahatany mpizahatany
Rano manga Blue Hole
Ny tranombakoka lehibe indrindra eran-tany
Fehezin-tena ho an'ny ankizy
Matetika ny ankizy no mihomehy
Rahoviana no manomboka amin'ny zaza vao teraka ny colic?
Alessandra Ambrosio dia lasa be herim-po amin'ilay sarimihetsika Love Magazine vaovao
Mofomamy amin'ny saosy tazo ho an'ny ririnina
Ny lehilahy Pisces am-pitiavana
Inona ny asidra hyaluronic?
Salady miaraka amin'ny pasta sy ny ham
Ny ultrasound voalohany amin'ny bevohoka - firy herinandro?
Kitapo ho an'ny hetsika sy fizahan-tany
Ny fiasan'ny hipoka ny diplaoma faharoa - fitsaboana
Amin'ny firy no tsara kokoa ny mankany Ejipta?
Fanairana amin'ny tanana - fitsaboana